Netflix မှအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှု ၅၀: မိုus်းမလင်းမှီတိုင်ဤအချိန်အထိ - လှုပ်ရှားမှုစွန့်စားမှု
Netflix မှအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင် ၅၀ - ဂျော့ကလူနီ၊ မိုent်းမလင်းမှီမွန်းတည့်မှ Quentin Tarantino ကြယ်ပွင့်
50 Best Action Movies Netflix
မြောက်အမေရိကရှိအင်တာနက်အသွားအလာအားလုံး၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်းအတွက်တာဝန်ရှိသည် Netflix နှင့်ပတ်သက်သည့်အကောင်းဆုံးရပ်တည်ချက်ဟာသ ၅၀ - Tom Segura: အများအားဖြင့်ပုံပြင်များတက်သည်
Dusk Till Dawn မှ George Clooney နှင့် Quentin Tarantino တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပါဝင်သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင် ၅၀ !
Netflix ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင် ၅၀ ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်တွင် အရုဏ်မှီတိုင်အောင်မိုD်းမလင်းမှီမှ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပူးပေါင်း!
Rick နှင့် morty ရာသီ4ဇာတ်လမ်းတွဲ7ဇာတ်လမ်းပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအခမဲ့
ပိုများသော netflix:Netflix ရှိအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင် ၅၀
လူအများစုသိပါတယ် အရုဏ်မှီတိုင်အောင်မိုD်းမလင်းမှီမှ ဂျော့ခ်ျကလူနီရဲ့ကြီးမားတဲ့ရုပ်ရှင်ချိုးအဖြစ်, ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်အဖြစ်။ လူတွေကမကြာခဏဆိုသလိုဒီရုပ်ရှင်ကဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာမေ့တတ်ကြသည် အရုဏ်မှီတိုင်အောင်မိုD်းမလင်းမှီမှ တကယ်!
ရုပ်ရှင်၏ဇာတ်ညွှန်းကို Quentin Tarantino, ငါတို့ခေတ်မှကြီးကျယ်သောဇာတ်လမ်းပြောသူများထဲမှရေးသားခဲ့သည်။ အရုဏ်မှီတိုင်အောင်မိုD်းမလင်းမှီမှ Robert Rodriguez မှဒါရိုက်တာနှင့်ဂျော့ဂ်ျကလူနီ၊ ဟာဗေးကိတ်တယ်၊ ဂျူလီတီလူးဝစ္စနှင့် Quentin Tarantino တို့ပါဝင်သည်။ Salma Hayek၊ Danny Trejo, Cheech Marin နှင့် Kelly Preston တို့ပါဝင်သည်။
ရုပ်ရှင်၌ Richie (Tarantino) နှင့် Seth Gecko (Clooney) တို့သည်ဘဏ်လုယက်မှုအပြီးတွင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးအကြိမ်များစွာဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်မက္ကဆီကိုသို့သူတို့လုံခြုံသည့်အိမ်တည်ဆောက်ရန်ထွက်ပြေးနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဘေးကင်းသည့်အိမ်သို့သူတို့သွားသောလမ်းတွင်သဘာဝလွန်သည်သူတို့၏အစီအစဉ်များတွင်ကြီးမားသောပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာ အရုဏ်မှီတိုင်အောင်မိုD်းမလင်းမှီမှ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်လောက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည့်အောင်မြင်မှုအတော်အသင့်ကောင်းသော်လည်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်နယ်မြေအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။
ရာသီ9netflix သူဆရာဝန်
သင်ဟာ Quentin Tarantino ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလျှင် Netflix ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင် ၅၀ ၏ကျန်အဆင့်ကိုတာရန်တီနိုရုပ်ရှင်ကြီးများအတွက်ကြည့်ရှုပါ။ ဘီလ်ကိုသတ်, Django Unchained, နှင့်ပိုပြီး! Netflix ရှိ Tarantino ၏ရုပ်ရှင်အားလုံးနီးပါးသည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်တွင်သတ်မှတ်သည်။ ပို။ ပင်ကြီးမြတ်ရုပ်ရှင်ရွေးဘို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထွက်စစ်ဆေး!
ယင်းကိုရာသီ4လေကြောင်း Sherlock မည်သည့်အခါ
ဘယ်တော့ cw အပေါ် riverdale Premiere ပါဘူး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Michael Scott စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို
လူစိမ်းသောအရာတို့ကိုရုပ်ပြ con 2018
အမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင်6streaming